फ्लाईट नं. ७१७ | Hamro Patro
२०७० फाल्गुन २४ / LENDAAI
कान धुम्म भयो एक्कासि– राति सालघारीमा कतै कीरा कराएजस्तो शून्न। पोखरीभित्र कतै डुबुल्की मारेजस्तो। एकछिन अघिसम्म पनि कान त्यसैगरी धुम्म थिए, कपास कोचेझैं, पोखरीमा डुबेझैं।
आँखा खोल्न सकिनँ। आँखीभौं टन्कियो। छामेँ, पानीझैं थियो केही। आँखा चिम्लिँदा परेलाको पृष्ठभूमिमा सिंगो ब्रह्माण्ड देखेझैं लाग्यो। त्यो ब्रह्माण्डमा कतै पृथ्वी नाचिरहेझैं लाग्यो। त्यो पृथ्वीमा कतै अँध्यारो नेपाल टुस्स आङ फिँजाएर बसेझैं लाग्यो। तर, त्यो नेपालको कुन भूगोलमा छु, देखिनँ। परेलामा कतै नक्सा देखिएनन्, धर्सैधर्सामात्रै देखिए।
स्पिकर बोल्छ, ‘नेपालगन्जदेखि काठमाडौंसम्मको फ्लाइट नम्बर ३०५ का यात्रु महानुभावहरू कृपया प्रस्थान गेटमा आइदिनुहोला।’
बूढा सोध्छन्, ‘आवाजै बुझिनँ बाबु, के भनी त्यो नानीले?’
उनी जुम्ला सुन्न चाहन्छन्, म भन्छु, ‘अझै १ घन्टा छ, नआत्तिनुस्। अहिले काठमान्डुको रै’छ।’
पत्नीतिर फर्केर खुसुरफुसुर गर्छन् र मतिर फर्केर फेरि सोध्छन्, ‘बाबु कहाँ जाने नि?’
‘म पनि जुम्लै हो।’
हाँसेजस्तै भन्छु, ‘स्पिकरमा अघिजस्तै बोलेको राम्ररी सुन्नुहोला, साढे ४ तिर।’
म एयरपोर्ट छिरेदेखि नै बूढाको छनक हेर्नलायक थियो। रिक्साबाट झरिसकेपछि दुईपटक शरीरमा लोकल इन्धन भरिसकेका थिए। साथमा बूढी थिइन् र एउटी २५ वर्षजत्तिकी छोरी। छोरीको काखमा अर्की नाबालक छोरी थिइन्।माइकबाट सुरिली नानी फेरि बोलिन्, ‘नेपालगन्जदेखि जुम्लासम्मको फ्लाइट नम्बर ७१७ का यात्रु महानुभावहरू कृपया प्रस्थान गेटमा आइदिनुहोला।’
‘बाबु, अब जाने हो?’
‘हो हजुर, उः त्यो ढोकातिर हिँड्नूस।’
‘बाबुको नाम?’ लाइनमा बूढाले सोधे।
‘आहा! कस्तो राम्रो।’
‘घरै जुम्ला ˜˜˜˜…’
बूढा के बोल्दै थिए, सुनिनँ। वा भनौं, ध्यानै दिइनँ। अगाडि लाइनतिर फर्किएँ। टाउको माथितिर फर्काएर आँखा चिम्लिएँ। कानमा फुल बाससहित ‘रोलिङ इन द डिप’ घन्कियो। क्या स्वर छ आहा!
‘घरै जुम्ला हो बाबुको?’
‘होइन, घर काभ्रे हो। पोस्टिङ २४ नम्बर बाहिनी हो।’
‘ए,’ बूढाले भयंकर ठूलो अनुसन्धान गरेझैं सन्तुष्टि दर्शाए। मलाई किनकिन उनको अनुहार हेर्नु थिएन। त्यसमाथि उनी अघिदेखि लोकल गन्हाइरहेका थिए।
‘मेरो नामचाहिँ हर्षजित,’ मैले नसोध्दै उनले परिचय खुलाए, ‘हर्षजित पुन।’
‘ए,’ मैले कुराको बिट मार्न चाहेँ।
‘थरचाहिँ के नि बाबुको?’
‘ए,’ बूढाले फेरि मुन्टो हल्लाए, ‘पैसा त थुप्रै हुन्छ होला नि है?’
‘हुन्न। मैना नउत्रिँदै गोजी उत्रिन्छ।’
‘को हो?’ चिच्याएरै बोल्न खोजँे, आवाज निस्किएन। घाँटीमा धुवाँको मुस्लो छिरेझैं भयो।
थुप्रैपटक ‘को हो?’ भनेँ घाँटीभित्रको एपिग्लोटिसनेर सासै ठोक्किएन।
तेलको गन्धले वाकवाकी आइसकेको थियो।’पानी … मरेँ …’
‘को हो …?’ भएभरको बलले चिच्याएँ। घाँटी बसेको आवाजमा धोद्रो स्वरले बोलाएँ। आवाज निस्किएछ सायद। उनले सुनिन् सायद।
‘म… म…’ यसरी उत्साहले बोलिन्, मानौं उनको अगाडि साक्षात् कुनै देवता उभिएका छन् र उनलाई हात दिएर तान्न खोज्दैछन्।
म अगाडिकै सिटमा थिएँ, उनी मेरो छेउमा। जिन्स पाइन्टमा सेतो ज्याकेट लगाएकी थिइन्। बायाँ आँखाको कुनामा सानो खत थियो। कपालमा सायद पर्म गरेकी थिइन्, घुमि्रएको थियो। मलाई घुमि्रएको कपाल मन पर्छ। उनी समग्रमा ठिकठाक लागिन्। मेरो जीवनभर छेउको सिटमा यसरी ‘ठिकठाक’ केटी कोही बसेका थिएनन्। मलाई कौतूहल जाग्यो।
‘म क्याप्टेन विजय।’
‘अनि प्लेन उडाउन छाडेर यता किन नि?’ उसले हाँसेर सोधी।
‘हैन, म प्लेन उडाउने क्याप्टेन होइन, परेको बेला मान्छे उडाउने क्याप्टेन,’ मैले पनि अट्टहास गर्दै टि्रगर दबाएको जेस्चर गरेँ।
मेरो ज्यान र कपाल देखेर उनले पहिल्यै लख काटेकी हुनुपर्छ, म सैनिक हुँ। क्याप्टेन भनेको सुनेपछि उसले लामो स्वरमा ‘ए…’ भनी र मुसुक्क हाँसी।
‘होइन, ड्युटीमा जान लागेको। २४ नम्बर बाहिनीमा।’
‘म रिपोर्टिङमा जान लागेको। अस्ति डोनर एजेन्सीले बाँडेको चामलले हैजा फैलिएको खबर आएपछि अफिसले पठाएको।’
‘सिक्दै हुनुहुन्छ कि टाइमपास गर्दै?’ जयाले हाँसेरै सोधी।
‘सिक्दै। तपाईं छेउमा भएपछि टाइमपासको टन्टा किन लिइराख्नू!?’ मैले जिस्काएको बुझी क्यार, हाँसी। हँसाउन सकेकोमा म पुलकित थिएँ।
‘कहिले पोस्टिङ भएको नि तपाईंको यता?’
‘डेढ वर्ष भयो। अब तेगरी (धनगढी) वा जोमसोम जाँदैछ हाम्रो गण। कि तातो भुंग्रोमा जाकिन्छ, कि हिउँको थुप्रोमा।’
हर्षजितले होस्टेसलाई भने, ‘ऊ, बाबुहरूलाई पनि सिकाइदिनुस् नानी, विचरा अघिदेखि हरेश खाइसक्नुभो।’
‘जया ˜˜˜!’ यसपटक झनै जोडले बोलेँ।
‘म ˜˜ म ˜˜˜ मरेँ ˜˜˜ ऐया ˜˜˜’ जया आत्तिएर बोलिन्। उनलाई लाग्यो– त्यहाँ ज्युँदो उनीबाहेक अरू पनि कोही छ, जो उनीछेउ गएर खोल्साबाट तानेर बाहिर निकालोस्।
‘एकछिन पख्नुस् है, म पनि च्यापिएको छु,’ ठूलो कष्टले सोधेँ, ‘तपाईंलाई ठिक छ?’
‘नआत्तिनुस् है ˜˜˜ म केही गर्छु,’ ढाडस दिन त भनेँ र मैले गर्न सक्ने केही थिएन।
दायाँतिर हेरेँ। जया लडेको खोल्सोभन्दा अलि वर धुजाधुजा परेको सेतो सर्ट देखेँ। सर्टनजिकै गाढा कालो क्याप देखेँ। सम्भवतः त्यो लुगा पाइलट वा को–पाइलटको थियो। मनमा ‰याप्प अनिशको अनुहार नाच्यो।000
‘ओए, आज लान्न कि के हो तेरो प्लेनले? कुराएरै दिन खायो यार,’ दिनभरि थिग्रिएको रिस थियो, पोखेँ, ‘आजै जाम् भन्नुपर्ने तैले पनि? मौसमबारे हिजै हेक्का राख्नुपर्छ नि,’ म ठुस्सिएझैं गरेँ।
‘पानी रोकिएको छ यार, अब एटीसीले गो अन भनेपछि उड्ने हो। बढी आत्तिन्छस् तँ,’ उसले आश्वस्त पार्न खोज्यो। म पो रिस र तनावले काल्लिएको थिएँ।
जुम्ला उडान सकेर फर्किएको ११ औं दिनमा ऊ बिहेको रस्साकस्सीमा लाग्दै थियो। यति समयपछि भेटिएको साथीले आग्रह गर्दा मैले १ दिन नसार्नु कसरी?’वेदरले ‰याउ गर्योस यार। दसै दिन फ्लाइट क्यान्सिल भए त बर्बादै भयो नि!’ ऊ हाँस्यो।
‘फ्लाइटै नभए म ब्यारेकको गाडी झिकाउँछु, टेन्सन नले,’ मैले सम्झाएँ।
‘हाहा। मजाक गरेको। यो २–३ दिनभन्दा बढी नटिक्ने झरी हो। अब फागुन सुरु हुन्छ, गर्मी आउन लागेको संकेत हो,’ उसले ढुक्क भएर भन्यो।
दुइटैको फ्लाइट क्यान्सिल भयो भने आज रुपैडिहा घुम्न जाने प्लान छ,’ ऊ पूरै दाँत देखाएर फेरि हाँस्यो, ‘तर, तँलाई पनि लैजान्छु, डोन्ट वरी। भाउजू चिन्लास्।’
कोट्याएर सोधेँ, ‘डर लाग्यो?’
‘यस्तै हो, अब २० मिनेट त हो,’ आश्वस्त पार्न खोजेँ र पनि ऊ बोलिन।
‘तपाईंहरूको पढाइ छुट्टै हुन्छ कि अरूथोक पढेर तालिम लिने हो?’
‘होइन, एयर होस्टेसको कोर्स हुन्छ, छुट्टै।’
‘अनि अभ्यासचाहिँ प्लेनमै हुन्छ कि क्लासमै?’
‘क्लास पनि हुन्छ, अनि प्य्राक्टिकल पनि,’ ऊ मन नलागेरै मलाई उत्तर फर्काइरहेकी थिई।
होस्टेसलाई बोलाएर सोधेँ, ‘हामी कहाँ पुग्यौं? फर्किराखेको हो कि जुम्लातिरै गइराको?’
उसको मुखबाट बल्ल बोली निस्कियो, ‘खोइ, फर्किन लागेको जस्तो लाग्छ।’
हतारहतार होस्टेसले चिच्याएर भनी, ‘सबैले सिटबेल्ट कसेर बाँध्नुस्। सकेसम्म ब्यागहरू काखमा नराख्नुस्।’